Shilinka been abuurka ah ee gobollada dhexe oo saameyn ku reebay Suuqyada Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Shilinka been abuurka ah ee gobollada dhexe oo saameyn ku reebay Suuqyada Puntland (Dhegeyso)
Luulyo 30, 2013 6:16 b 0
Garoowe, July 30, 2013 – Qaar ka mid ah suuqyada sarifka ee deeganada Puntland ayaa walaac ka qaba, ?saameynta ay ku yeelatay gobollada dhexe ee dalka lacagaha been abuurka ee la soo geliyey.
Magaalada Galkacayo ee xaruunta gobolka Mudug ayaa haatan laga dareermay arruurinta lacagta shilinka Soomaaliga ah, taas oo loo qaadayo dhanka magaalada Beledweyne ee xaruunta gobolka Hiiraan.
Ganacsatada suuqyada sarifka ee Galkacayo waxay ku tilmaameen qorshaha Shilin Somaaliga loogu qaadayo Beledweyne in ay tahay mid looga faa?iidaysanayo sarakaca ku yimid Dollarka, xili lacago been abuur ah oo la geliyey gobollada dhexe iyo koonfurta ay wax weyn ka bedeshay nolosha dadka.
Arrintan ayaa la sheegay in ay tahay mid ay faa?iido ugu jirto ganacsato ku shaqo leh howlahan, balse ay is bedel nololeed keentay, waxaa sare u kacay sarifkii lacagaha qalaad ee gobollada Galguduud iyo Hiiraan, kuwaas oo ah meelaha ugu badan ee lacagta been abuurka ah wax lagu kala iibsado.
Howlaha ganacsi ee dhanka Sarifka Garoowe ayaa sidoo kale saameyntu taabatay, qaar ka mid ah Ganacsatada oo la hadlay Daljir, waxay sheegeen in ay joogsadeen lacagihii shilinka Soomaaliga ee ka iman jiray Galkacayo, sababta ayaa ah shilinkii oo loo rarrayo gobollada dhexe ee dalka oo sicir ka jiro.
War-bixinta arrimaha sarifka iyo is bedelka Cabdiweli Maxamed Sheikh